SANADKA 2016-KA, UKRAINE AYAA U DHOOFISA EU-DA OO KORDHAY 3.7% - UKRAINE
Sanadka 2016-ka, Ukraine ayaa u dhoofisa EU-da oo kordhay 3.7%
Sanadka 2016-ka, dhoofinta alaabta Ukrayna ee Midowga Yurub ayaa kor u kacday 3.7%, taas oo muujinaysa wax ku oolnimada degaanka ganacsiga xorta ah, sidaasi waxaa sheegay adeegga saxaafadda ee Wakaaladda Midowga Yurub ee Kiev 22-kii Febraayo. Sida laga soo xigtay farriinta, maanta Midowga Yurub waa shirkadda ugu weyn ee ganacsiga ee Ukraine, kaas oo daboolay 37.1% soo dhoofinta Ukraine ee 2016 (dhoofinta Ukraine si Russia loo dhiso 9.9% wadarta dhoofinta). Marka la eego soo dejinta, sannadka 2016 dakhliga ganacsiga ee u dhexeeya Ukraine iyo EU ayaa kor u kacay 8.1%.
Waa in la ogaadaa in dhinacyadu ay gaari doonaan heerarka kobaca sareeya ee geedi socodka hirgelinta Heshiiska Ururka Midowga Yurub iyo Midowga Yurub 7da sano ee soo socda. Soo-dhoofinta Yukreeniya waa in ay ka faa'iideysataa mideynta sharciyada iyo heerarka farsamo ee heerarka EU-da. Iskudhinta qoto-dheer ee dhinaca amniga cuntada iyo xeerka badbaadada macaamiisha, iyo sidoo kale heerarka farsamooyinka ee warshadaha iyo wax soosaarka beeraha, waxay furi doonaan suuqyada EU-da si aad u weyn uguna fududeynaya yaraynta canshuuraha.